Somali - BBC News Somali_全民集運
Kim Yo-jong: Haweeneyda ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi
TOOS Madaxweyne Qoor-qoor oo goordhaw gaaray Muqdisho
Tebinta tooska ah
"Waxaan daawanayay wiilkayga oo 12 jir ah oo la gowracayo"
Haweeney ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegtay inay daawanaysay iyadoo wiilkeeda oo 12 sano jir ah madaxa looga jarayay meel u dhow halka ay ku dhuumaalaysanaysay iyada iyo saddex carruur ah oo kale oo ay iyada dhashay.
Arrimo muhiim ah ka ogow dacwadda maanta dhageysigeeda la billaabay
Muddo badan oo Soomaaliya iyo Kenya uu u dhaxeeyey muran badeed, waxaad mooddaa in la soo gaadhay gebagebadiisii, taas oo ka dhigan in midkood lahaan doono waax badeedka yar asee ay jiifaan khayraadka baahsani.
Hadal heyn ku saabsan in la la’yahay Madaxweynaha Tanzania oo dad loo xirxiray
Madaxweyne John Magufuli ayaan fagaare lagu arkin muddo labo isbuuc ah, iyadoo ay jireen warar la isla dhex marayay oo sheegaya inuu xanuunsan yahay.
Gabadh 12 jir ah oo la afduubay si loogu guuriyo nin aysan isku diin ahayn
Ilaa 1,000 gabdhood oo isugu jira masiixiyiin, Hindu iyo Sikh ayaa la sheegay sanad kasta lagu afduubto Pakistan, kaddibna lagu khasbo in ay diinta islaamka qaataan oo la guursado.
Muxuu yahay talaalka AstraZeneca ee maanta Soomaaliya la geeyay?
Tallaalka maanta la geeyay Muqdisho, wuxuu gaarayaa ilaa 300,000 oo ah nooca Oxford-AstraZeneca si loo gaarsiiyo boqolkiiba 20% ka mid ah dadka ku nool Soomaaliya.
Macluumaad: Dhageysiga dacwadda muranka badda ee maanta Hague ka bilaabnaya
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Hague ee dalka Holand uu ka bilaabmo dhageysiga dacwada muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Maxaad kala socotaa dalalka iibiya hubka ugu badan caalamka?
Maxay Kenya sida lama filaanka ah uga baxday dhageysiga dacwadda badda?
14 Maarso 2021
Maalintii ugu dhiig daadashada badnayd magaalada Yangon ee Myanmar
Dhageyso, Dhageyso: Kumuu ahaa Janaraal Axmed Jaamac Muuse, Muddada 1,10
Magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday allaha u naxariistee Taliyihii hore ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Janaraal Axmed Jaamac Muuse.
11 Maarso 2021
Muuqaal, Dastuurka Soomaaliya iyo qoondada dumarka, Muddada 3,05
Sida dastuurka uu qabo, dumarka way qaban karaan xilalka ugu sarreeya ee Soomaaliya, balse maxaa ku gudban?
9 Maarso 2021
Listen Next, Xiga Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 16 Maarso 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 16 Maarso 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 15 Maarso 2021, Muddada 45,30
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 15 Maarso 2021, Muddada 30,30
Isbarbardhigga awoodda militari ee Itoobiya iyo Suudaan
Waxaa sii xoogeysaneysa xiisadda u dhaxeysa dalalka Itoobiya iyo Suudaan, kuwaasoo isku heysta deegaanno ka mid ah xadka kala qeybiya.